Ụbọchị My Pet » 7 Atụmatụ N'ihi a lụwa
emelitere ikpeazụ: Jan. 24 2021 | 2 min agụ
Mmụọ ozi nke ịhụnanya kụrụ aka n'ọnụ ụzọ gị? Ị bụ otu n'ime ndị kechioma ndị, ma ugbu a, i nwere na-ire. Olee otú ndị ebighị di na nwunye na-eme ya? Ị bụ nri anya na ntụziaka ndị ha na-agbalị ịmụta ihe site n'aka ha. Lee ụfọdụ n'ime ha na nzuzo na ụfọdụ Atụmatụ-enyere gị aka ịnọgide na-enwe ihe ịga nke ọma banye ná mmekọrịta ịhụnanya:
1. Ịtụkwasị Obi onwe gị
Ọ bụghị ihe niile banyere gị, ma a otutu mmekọrịta mbipụta chọta ha isi na abụọ mmekọ’ onwe-obi ike. N'ezie, tupu n'anya onye, i nwere na zuru nkwekọrịta na onwe gị, ịhụnanya na-atụkwasị obi onwe gị. Ịbụ na di na nwunye bụ ohere ezo n'azụ mmadụ azụ. Ọ / ọ na-egbuke egbuke? Unu jụọ onwe gị ihe mere o ji / ọ bụ na ị na-. Kama, na-n'aka na ị na-eme ka a ọma egwuregwu. Ọ / ọ nwere ohere na-na onye dị ka gị. Enweghị ndidi gabiga ókè, ị ga-ahụ onwe gị n'ihi na ihe ị na-, na ihe onye gị na-ahụ na ị na-.
2. Eburu gị ma ọlị gị ekworo
N'ịbụ a di na nwunye pụtara na-eje ije ọnụ n'otu direction. Ịtụkwasị onye ọ bụla ọzọ dị mkpa ma na-metụtara gị onwe-obi ike. Gị na onye òtù ọlụlụ na-ezube nwere otu mgbede na ndị enyi na a mmanya? Nye ya / ya ụfọdụ ohere na-eme adịghị wakpo ha na ajụjụ ndị dị ka: Ebee ka ị nọ? È nwere ndị na ụmụ agbọghọ / okorobịa? Ekworo bụ ihe na-agwụ ike na ọ na-emekwa bụ ụzọ kasị mma ka o ziga onye pụọ.
3. Na-akwado ibe
Otu n'ime ihe ndị kasị mma banyere ịbụ na di na nwunye bụ na ị nwere onye na-akwado gị n'oge mkpa. Nabata agbamume, na ịmụta àgwà yiri nke ahụ mgbe gị na onye òtù ọlụlụ kwesịrị ya. Onye ọ bụla dị a ọma mmekọrịta ga-agwa gị na ihunanya mmekọ na-, na mbụ, n'eziokwu na ndị na-akwado ndị enyi onye ọ bụla ọzọ, na na e mesịa, ndị hụrụ.
4. Iju onye ọ bụla ọzọ
Anyị niile na-eche na-esi nke na-eme, a nchara na-adịghị na odomo gị na sweetie n'ime n'ihe ndina poteto. Anyị niile nwere nta anyị àgwà na jupụta ndụ anyị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na mmekọrịta gị na ire ọkụ elu, gbalịa ka ị ghara ina etinye obi gị dum site-eme kwa ụbọchị na-enweghị ihe ọ bụla twists ndụ gị. Sinụ ọnụ, ịkọrọ ọhụrụ ahụmahụ. Cheta na ịhụnanya dị ka a nwa, ọ chọrọ ka a nri.
Open nkwurịta okwu bụ surefire ụzọ a dị ike mmekọrịta. Ọ na-enyere gị ga-esi mara onye ọ bụla ọzọ mma, ịghọta otú obi dị gị banyere dị iche iche okwu, ma na-ahụ ndị ọzọ si ele ihe anya. Unu ewu ájá castles! Gwa onye ọ bụla ọzọ na mmekọrịta gị na ntọala ga-sikwuo na ihe.
6. Were oge ụfọdụ maka onwe gị
A mmekọrịta kwesịrị raara onwe ya nye oge, ma nke a apụtaghị na onye ọ bụla onye òtù ọlụlụ ike nwere ihe ọ bụla n'akụkụ na. Unu ka nwere ndị enyi gị, gị omume ntụrụndụ na-arụ ọrụ gị! Ịrara oge ụfọdụ ha na onwe gị naanị. A awa ole na ole iche onye gị ga-eme ka ị na-atụ uche ma na-ekele onye ọ bụla ọzọ ihe.
7. -Eme ihe n'eziokwu na-onye ọ bụla ọzọ
Obi Eziokwu bụ a isi zuru okè ndabere maka ụdị ọ bụla nke mmekọrịta. Ga na-agwa onye ọ bụla ọzọ na-ekwurịta okwu mmetụta gị okwu ọjọọ ma ọ bụ ndị na-abụghị okwu. Nke a ga-eme ka njikọ gị ike.